स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले महिलाको बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर कति हो ? - ज्ञानविज्ञान
एक स्वस्थ बच्चा जन्माउनका लागि महिलाको एउटा निश्चित उमेर हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले आमा बन्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर २० देखि ३० वर्षलाई मान्ने गरिन्छ । त्यसपछि क्रमशः उमेर बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै जान्छ । यद्यपी ३५ वर्षसम्मका महिलाले राम्रोसँग बच्चा पाउन सक्ने चिकित्सकहरु बताउंछन् ।
३५ वर्ष उमेर नाघिसकेकी महिलाबाट जन्मने बच्चामा पनि डाउन्स सिन्ड्रोमजस्ता जन्मजात विकार आउने सम्भावना हुन्छ ।
त्यस्तै २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले पनि बच्चा पाउँदा जोखिम हुने बताइएको छ । महिलाको उमेर १९ वर्षभन्दा कम छ भने सन्तान पाउनका लागि केही समय पर्खिनु नै उत्तम हुन्छ ।
गर्भ रहेदेखि नै केही कुरामा सर्तकता अपनाउने, सजग हुने, खानपान र दिनचर्यालाई सन्तुलित राख्ने हो भने धेरै हदसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ, जन्म लिने बच्चा स्वस्थ्य हुनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्रका रसायनहरूबाट टाढा रहनुहोस्। यी चिजहरूले गर्भको बच्चाको विकास हुन दिँदैनन् । यी चिजहरूलाई नछुनुहोस् र यीनको वरिपरि पनि भरसक नबस्नुहोस् । यस्ता चिज राखेका भाँडाहरूमा पानी वा खानेकुरा केही नराख्नुहोस्।
Up Next मानिसको धर्म के हो ? ( भिडियोसहित )